Izindaba - zithini izingxenye zephaneli elanga
Okokuqala, ake sibheke umdwebo wezinto zamaphaneli elanga.
Isendlalelo esiphakathi impela ngamangqamuzana elanga, ayisihluthulelo nesisekelo sephaneli lelanga. Kunezinhlobo eziningi zamaseli elanga, uma sixoxa ngokubuka kosayizi, uzothola osayizi abathathu abakhulu bamaseli elanga emakethe yamanje: 156.75mm, 158.75mm, no-166mm. Usayizi weseli yelanga nenombolo kunquma usayizi wepaneli, ukuthi iseli likhudlwana futhi liyanda kangakanani, iphaneli lizoba likhulu. Amaseli mancane kakhulu futhi aqhekeka kalula, lokho kungenye yezizathu zokuthi kungani sihlanganisa amaseli kumapaneli, esinye isizathu ukuthi iseli ngalinye lingenza kuphela uhhafu we-volt, okukude kakhulu nalokho esikudingayo ukusebenzisa into yokusebenza, ngakho-ke ukuze sithole ugesi omningi, sifaka amaseli ochungechungeni bese sihlanganisa yonke intambo yochungechunge ibe yiphaneli. Ngakolunye uhlangothi, kunezinhlobo ezimbili zamaseli elanga e-silicon: i-monocrystallian ne-polycrystallian. Ngokuvamile, ibanga lesilinganiso sokusebenza kweseli le-poly lisuka ku-18% liye ku-20%; namaseli emono kusuka ku-20% kuye ku-22%, ngakho-ke ungatshela ukuthi amangqamuzana e-mono aletha ukusebenza okuphezulu kunamaseli amaningi, futhi kuyafana ngamapaneli. Kuyacaca futhi ukuthi uzokhokha imali ethe xaxa ngokusebenza kahle okusho ukuthi iphaneli yelanga ye-mono iyabiza kunephaneli yelanga eningi.
Ingxenye yesibili yifilimu ye-EVA ethambile, esobala futhi enamathela kahle. Ivikela amangqamuzana elanga futhi yandisa amandla wamaseli wamanzi nokumelana nokugqwala. Ifilimu ye-EVA efanelekayo ihlala isikhathi eside futhi ilungele ukumbozwa.
Enye into ebalulekile ingilazi. Qhathanisa nengilazi ejwayelekile, ingilazi yelanga yilokho esikubize ngokuthi ingilazi yomswakama ocacile nophansi wensimbi. Kubukeka kumhlophe kancane, kugqokiwe ebusweni ukukhuphula izinga lokudlulisa elingaphezu kuka-91%. Isici esimuncu sensimbi sandisa amandla ngakho-ke sandisa amandla wokukhanda nokumelana kwamapaneli elanga. Ngokuvamile ukushuba kwengilazi yelanga kungu-3.2mm no-4mm. Amapaneli amaningi osayizi abavamile amaseli angama-60 namaseli angama-72 kuthi ingilazi engu-3.2mm, namapaneli amakhulu osayizi njengamaseli angama-96 asebenzisa ingilazi engu-4mm.
Izinhlobo zekhasi langemuva zingaba ziningi, i-TPT isetshenziswa ngabakhiqizi abaningi bamapaneli welanga e-silicon. Imvamisa i-TPT imhlophe ukukhuphula izinga lokukhombisa futhi yehlise izinga lokushisa kancane, kepha kulezi zinsuku, amakhasimende amaningi akhetha okumnyama noma imibala ukuze athole ukubukeka okwehlukile.
Igama eligcwele lohlaka luhlaka lwe-anodized aluminium alloy, isizathu esiyinhloko sokuthi kungani sengeza ifreyimu ukukhulisa amandla wokusebenza kwephaneli elanga, ngakho-ke kusiza ukufakwa nokuthuthwa. Ngemuva kokungeza ifreyimu nengilazi, iphaneli yelanga iba lukhuni futhi iqine cishe iminyaka engama-25.
Okokugcina, ibhokisi lokuhlangana. Amapaneli elanga afanelekile onke anebhokisi lokuhlangana afaka ibhokisi, ikhebuli nezixhumi. Ngenkathi amapaneli elanga amancane noma enziwe ngokwezifiso angahle angafaki konke. Abanye abantu bakhetha iziqeshana kunezixhumi, kanti abanye bakhetha ikhebuli ende noma emfushane. Ibhokisi lokuhlangana elifanelekile kufanele libe nezindawo zokudlula ukuvimbela indawo eshisayo nesekethe elifushane. Izinga le-IP likhombisa ebhokisini, ngokwesibonelo, i-IP68, likhombisa ukuthi linamandla okumelana namanzi aqinile futhi liyayivumela ihlupheke yimvula eqhubekayo.